Ehellusuna oo dan gaar ah ku tilmaamay go?aankii baarlamanka ee lagu tuuray xukuumada (Dhegeyso) – Radio Daljir
Ehellusuna oo dan gaar ah ku tilmaamay go?aankii baarlamanka ee lagu tuuray xukuumada (Dhegeyso)
Diseembar 4, 2013 4:31 b 0
Guriceel, December 4, 2013 – Ururka Ehellusuna Waljamaaca ee gobollada dhexe ee dalka ayaa ka hadlay go?aankii baarlamanka Soomaaliya ay kalsoonida kagala noqdeen Ra?isal wasaare Cabdi faarax shirdoon iyo xukuumadiisa oo shaqada ka tegaya.
Ehellusuna ayaa go?aankaas ku tilmaamay mid aan ka turjumayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha Ehellusuna ee gobollada dhexe Sheikh Cumar Cabdulqaadir ayaa ku tilmaamay khilaafka madaxda sare ee dowladda oo keenay in baarlamanka mooshin laga geeyo xukuumada in uu ahaa mid dano gaar ah laga leeyahay, isla markaasna lagu afduubay rabitaanka Soomaalida.
?Tan kama turjumayso go?aanka rasmiga ah ee baarlamanka iyo xataa doonista shacabka Soomaaliyeed, waa mid laga lahaa dano gaar ah oo laga shaqeeyey, wayna dhacday in xukuumada la tuuro.? Ayuu yiri sheikh Cabdulqaadir oo waraysi siiyey Daljir
Ugu dambayntii gudoomiyaha gobollada dhexe ee Ehellusuna sheikh Cumar Cabdulqaadir, waxaa uu sheegay in uu meel wanaagsan marayso hanaanka maamul u samaynta Ehellusuna ee gobollada dhexe dalka Soomaaliya oo mudo socday.
Dhegeyso:- Jamaac cabdiraxmaan oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Gudoomiye Sheikh Cumar
Ganacsatada iyo rayidka Beledweyne oo dalbanaya in dib loo furo jidad muhiim ah oo la xiray